Afhayeenka Deegaanka Midwest waa xarun sharciyadeed oo aan faa'iido doon ahayn, oo aan u shaqeynin biyo caafimaad, hawo, dhul iyo dawlad jiilba iyo tan xigta. Iyadoo ku saleysan Wisconsin, MEA waxay ka caawisaa muwaadiniinta inay isticmaalaan awoodda sharciga si ay u difaacaan biyaha nadiifka ah ee nadiifka ah, goobaha caafimaadka leh ee caafimaadka leh, ka qaybqaadashada dadweynaha ee go'aan qaadashada, iyo dawlad furan oo xisaabtan leh.
Dusha sare ee Wabiga Mississippi, ee gobolka woqooyiga, oo marwalba u muuqda inuu yahay hogaamiye lagu xoojinayo horumarinta dhaqaalaha ee ilaalinta deegaanka. Tani waxay u baahan tahay iskaashiga dowladda, warshadaha iyo beeraha, iyo dadweynaha. Iyada oo taageero laga helayo Xarunta McKnight Foundation, MEA waxay bixisaa caawimaad xagga sharciga ah iyo farsamo si loogu dhiirrigeliyo muwaadiniinta in ay xajiyaan khadadka tobannaan sano ee horumarka ka dib markii la dejiyo sharciyada sida Xeerka Biyaha. Hadda oo ka badan abid, muwaadiniintu waxay ubaahan yihiin inay hoggaamiyaan hoggaanka haya'daha dawladda, warshadaha iyo beeraha ee la xisaabtami karo si wax ku ool ah iyo ilaalinta deegaanka.
Advocates Environmental Advocates waxay ku faraxsan yihiin inay la socdaan marti-geliyeyaasha maalinlaha ah ee kheyraadka dabiiciga ah ee aynu wadaagno. Wax badan ka baro shaqadayada midwestadvocates.org.